အိုက်စလန်ရှိအလယ်တန်းကျောင်းသူ / သားများအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၊ လိင်ဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများသုံးစွဲမှု (၂၀၁၇) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်ရှိ Porn
သုတေသီများကလည်း 30 + ရာခိုင်နှုန်းစအိုလိင်ဆက်ဆံမှုနှုန်းအစောပိုင်းကဒီဆယ်စုနှစ်လေ့လာမှုများထက်ပိုမိုမြင့်မားကြောင်းသတိပြုပါ:
"ပိုနည်းစအိုလိင်ဆက်ဆံသို့မဟုတ် Akers et al အားဖြင့်ကောက်ယူလေ့လာမှုမှာတွေ့ရှိခဲ့ 30% ထက်စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာပိုမိုမြင့်မားအချိုးဖြစ်သောအကြောင်းကို 6% အတွက်စေ့စပ်ခဲ့သည်။ (2011) နှင့် 10% Haydon, Herring, Prinstein နှင့် Halpern (2012) ကကောက်ယူတဲ့လေ့လာမှုမှာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ထို့အပြင်, ဒီလေ့လာမှုမှာပါဝင်သူများ၏ 12% အုပ်စုသည်လိင်အတွက်စေ့စပ်ခဲ့သည်။ "
ပင်မစာမျက်နှာ > Vol 2, အဘယ်သူမျှမ 1 (2017) > Freysteinsdóttir
FreydísဂျေFreysteinsdóttir, Astro အီးBenediktsdóttir
ဤလေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာအလယ်တန်းကျောင်းတွင်ကျောင်းသားရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်. အသိပညာအဖြစ်မိမိတို့၏ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုရရှိခဲ့သည်။ တစ်ဦးကမေးခွန်းလွှာတစ် stratified ကျပန်းနမူနာအပေါ်အခြေခံပြီးရွေးချယ်ထားသည့်ငါးကောလိပ်များအတွက် 384 ကျောင်းသားများကကိုပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ ကျောင်းသားအများစုမှာအသက်အရွယ်သို့မဟုတ် 18% ၏ 20-87 နှစ်ပေါင်းခဲ့ကြသည်။ အဓိကရလဒ်တစ်ခုမှာပါဝင်သူများထဲမှအများစုမှာညစ်ညမ်း (86%) မြင်ခဲ့ပြီးသောဖြစ်ခဲ့သည်။ သူတို့ကပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့အညစ်ညမ်းမြင်သောအခါသင်တန်းသားများရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုအသက်အရွယ် 13 ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူတို့ကပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့အညစ်ညမ်းကြည့်ရှုအားပေးနှင့်အမျိုးသမီးထက်ညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်အချိန်ပိုမိုသုံးစွဲသည့်အခါလူတို့သညျအမြိုးသမီးမြားထက်သိသိသာသာအငယ်ရှိကြ၏။ သူတို့နှင့်အတူရေရှည်ဆက်ဆံရေးမျိုးရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပါကြောင်းပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးနှင့်အတူလိင်အတွက်စေ့စပ်ပြီးမှအားလုံးပါဝင်သူများ၏ထက်ဝက်ခန့်ကိုအမြဲတမ်းကွန်ဒုံးအသုံးမပြုခဲ့သည်။ ညစ်ညမ်းနှင့်၎င်း၏စားသုံးမှုအဆက်မပြတ်အတိတ်ဆယ်စုနှစ်အနည်းငယ်ကျော်ကြီးထွားလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ယင်း၏တိုးတက်မှုအတွက်အဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ခုမှာတိုးပွားလာနည်းပညာနှင့်အင်တာနက်ကိုပိုမိုလွယ်ကူလက်လှမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဘက်စုံလိင်ပညာရေးအဖြစ်လျှင်မြန်စွာလူငယ်တစ်ဦးကလူရဲ့လိင်၏ပုံသဏ္ဍာန်အတွက်ကြီးမားသောအန္တရာယ်အချက်နှင့်၎င်းတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးစဉ်းစားနိုင်သည့်ညစ်ညမ်းအဖြစ်စိုက်ပျိုးမထားပါဘူး။
ယခင်ကဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းငါးအလယ်တန်းကျောင်းများအနေဖြင့် 384 ကျောင်းသားများကိုဒီလေ့လာမှုမှာပါဝင်ခဲ့။ ထက်ဝက်နီးပါးအထီးသို့မဟုတ် 187 (49%) နှင့် 193 (50%) အမျိုးသမီးကြ၏။ နှစ်ဦးကကျားသို့မဟုတ် 1% စုစုပေါင်း ပတ်သက်. မေးခွန်းကိုဖြေမပေးခဲ့ပါဘူး Non-နှင့်လိင်ကွဲပြားမှုအနည်းငယ်အဖြစ်မိမိတို့ကိုယ်ကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ သင်တန်းသားများကို၏အသက်အပိုင်းအခြား 18 ထံမှ 50 ကျော်ဖို့ပဲ, သို့သော်, ကျောင်းသားများအများစုအသက် 18-20 နှစ်ပေါင်း (87%) ရှိကြ၏။ 182 ကျောင်းသားများကို (18%) 49,7 နှစ်ရှိခဲ့ကြသည်, 92 ကျောင်းသားများကို (25%) 19 နှစ်ရှိခဲ့ကြသည်။
ပုံ 1 တွင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်သကဲ့သို့, သင်တန်းသားများကိုအများစုနီးပါးလူအပေါငျးတို့ (86%) နှင့်အမျိုးသမီးအများစု (99%), ညစ်ညမ်း (73%) စောင့်ကြည့်ခဲ့သည်။ အဆိုပါခြားနားချက်သိသာခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ကပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့အညစ်ညမ်းမြင်ကြပြီးမှသင်တန်းသားများရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုအသက်အရွယ် 13 ဖြစ်ခဲ့သည်။ ညစ်ညမ်းမြင်ဘူးသောသူတို့၏အမျိုးအ, အများစု 11 မှ 17 ၏အသက်အရွယ်မှာညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်ဖို့စတင်ခဲ့သည်။ အများစုကအမျိုးသမီးတွေ 15 သို့မဟုတ် 16 ၏အသက်အရွယ်မှာညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်ဖို့စတင်ခဲ့တယ်။ သို့သော်အများဆုံးလူများ၏အသက်မှာညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်ဖို့စတင်ခဲ့ 12 သို့မဟုတ် 13။ သူတို့ကပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့အညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်သည့်အခါထို့ကြောင့်ယောက်ျားမိန်းမတို့သည်ထက်သိသိသာသာအငယ်ရှိကြ၏။ အနည်းငယ်သင်တန်းသားများကိုသူတို့သာအသက်ငါးနှစ်သို့မဟုတ်အငယ်စဉ်အခါပထမဦးဆုံးအကြိမ် (1.7%) များအတွက်ညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်ခဲ့သည်။
သင်တန်းသားများကိုညစ်ညမ်းဆီသို့ဦးတည်သူတို့ရဲ့စိတ်ခံစားမှုကိုဖော်ပြရန်ဖို့တောင်းခံခဲ့ရသည်။ သင်တန်းသားများကို၏ထက်ဝက်ခန့် (48%), သူတို့ကညစ်ညမ်းဆီသို့ဦးတည်အပြုသဘောမဟုတ်သလိုအနုတ်လက္ခဏာမခံစားချက်တွေကိုခဲ့ကြောင်းဖြေသည်။ ယောက်ျားတစ်ဦးပိုမိုမြင့်မားအချိုးတစ်ခုကိုညစ်ညမ်းအပြုသဘောဆောင်တယ်လို့ထင်ခဲ့တဲ့အမြိုးသမီးမြားထက် (41%) (17%) ။ အလားတူပင်ပိုပြီးအမျိုးသမီးတွေညစ်ညမ်း, အနုတ်လက္ခဏာအမျိုးသမီးများအဖြစ်သူတို့ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုအားပေးကြောင်းဖြေကြားသောသူတို့၏အမျိုးအ 81% အနုတ်လက္ခဏာဖြစ်ခဲ့သည်ထင်။ သိသိသာသာပိုပြီးအမျိုးသမီးများ,2= ယောက်ျား (χ4 (33.31) ထက်ညစ်ညမ်းဆီသို့ဦးတည်နေတဲ့အနုတ်လက္ခဏာအမြင်ခဲ့ p <0.001) ။
ညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်ခဲ့သူပါဝင်သူ (86.1%) ညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်မရခဲ့တဲ့သင်တန်းသားများကိုနှိုင်းယှဉ်ခဲ့ကြသည်အခါ, ညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်ခဲ့တဲ့သင်တန်းသားများကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြုမူကြုံတွေ့ခဲ့ကြဖို့ပိုဖွယ်ရှိခဲ့ကြသည်။
သင်တန်းသားများကိုကျော် 70% ကဒီလေ့လာမှုမှာအကြောင်းမေးခဲ့ကြသောသူအပေါင်းတို့သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြုမူကြိုးစားခဲ့ဖူးသော်လည်းစအိုလိင်ဆက်ဆံ (31%) မှလွဲ. ညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်ခဲ့သူသင်တန်းသားများကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူသည်ဤလေ့လာမှုမှာအကြောင်းမေး၏တစ်ဦးချင်းစီကြိုးစားခဲ့ကြဖို့ပိုဖွယ်ရှိခဲ့ကြသည် , ညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်မရခဲ့တဲ့သင်တန်းသားများကိုထက်။